Inodzivirira Mask Yekutengesa
Ruoko rwunoita ruoko
Masks anodzivirira anosanganisira masiki ekudzivirira ezuva nezuva uye masiki ekudzivirira ekurapa
Massage ekudzivirira zuva nezuva
Iyo mask yemasiki yekudzivirira kwemasikati yakagadzirwa neyemidziyo sefa. Masks ekudzivirira kwezuva nezuva anonyanya kukamuraniswa kuva masks eguruva uye anti-virus masks.
Masvumbi emarara ane dziviriro kubva kune inokuvadza guruva maoerosols. Masvina-proof masks anowanzove mukombe-wakaumbwa, uyo unogona kukwana mukanwa nemhino zvinobudirira kuti uwane mhedzisiro yekudzivirira guruva. Masvumbi emarara anowanzo shandiswa kuvharira guruva uye nekuzadza gasi, asi haagone kusevha hutachiona.
Anodzivirira-hutachiona masks imhepo yekudzivirira yekushandisa inoshandiswa kuchengetedza nhengo dzekufema kubva kune huturu hwehutachiona hwehondo yekurwisa uye guruva rine radioactive.
Kurapa kwekudzivirira mask
Chiso chemasokisi ekudzivirira ekudzivirira akapatsanurwa mukati, mukati uye kunze magadziriso. Iyo yemukati yakasarudzika yakajairwa hutsanana echero uye isiri-yakarukwa machira.Ipakati dhiraivha ndeye Ultra-yakanaka polypropylene fiber yakanyauka-yakapukutwa zvinhu muswe. Iyo yekumukati yejira ndeye isina-yakarukwa machira uye yekupedzisira-yakaonda polypropylene inonyungudika Spray zvinhu zvasara.
Iyo yakanyanya hydrophobic uye inofemerwa.Ine yakakosha yekusefa pamhepo ine hutachiona maerosols uye inokuvadza guruva rakanaka. Mhedzisiro yekusefa yakanakira, uye zvigadzirwa zvinoshandiswa hazvisi-zvehupfu uye hazvikuvadze.Zvakagadzikana kupfeka.
Iyo inogona kudzivirira kutapukira kunokonzerwa neanfambidhi dhayamita ≤ 5μmg kutapukira mumiririri uye hwedhinha kusangana nekurwara-nemarara chirwere. Iyo tunhu yekusefa kwemaitiro e mask maski haisi pasi pe95%, uye danho redziviriro rakakwira.
Iyo mask yekudzivirira yekurapa inoshandiswa kuchengetedza muviri wemunhu kubva kumatare akasungirirwa mumhepo, kuchengetedzwa kwevashandi vekurapa munzvimbo dzezvirwere zvinotapukira, kuchengetedzwa kwevashandi vevashandi vehutachiona, kuchengetedzwa kwemaitiro akasiyana-siyana evashandi panguva yekuputika kwezvirwere zvinotapukira. makemikari, vashandi vemumugodhi, pollen allergy vashandi, nezvimwewo